डा. केसीको अनसन : आयोगले दियो दुबै पक्षलाई यस्तो सुझाव - Deshko News Deshko News डा. केसीको अनसन : आयोगले दियो दुबै पक्षलाई यस्तो सुझाव - Deshko News
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डा. गोविन्द केसीका मागबारे सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । आयोगले विमतिका विषय वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा आमरण अनशनजस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षाजस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ । डा केसीसँग नेपाल सरकारले विगतमा पटक–पटक गरेका सम्झौताप्रति गम्भीर हुँदै डा कसीको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न तथा विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्ला र प्रदेश कार्यालय वाग्मतीले अनशनस्थल जुम्लादेखि नै निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएकाले अनशनको नवौँ दिन डा. केसीलाई नेपालगञ्ज हुँदै काठामाडौँ ल्याई वीर अस्पतालस्थित ट्रमा सेन्टरमा लगिएको थियो । तर, उनको चाहानाअनुसार उनलाई हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ ।